Kbatan Markab oo Jarmal ah oo xoog ku galay dekad talyaniga ku taal badbadisayna 40 qof oo muhaajiriin ah | Biyoguurenews.com
Home Wararka Kbatan Markab oo Jarmal ah oo xoog ku galay dekad talyaniga ku...
Kbatan Markab oo Jarmal ah oo xoog ku galay dekad talyaniga ku taal badbadisayna 40 qof oo muhaajiriin ah
Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Talyaaniga, Matteo Salvini, ayaa waxa uu ku eedeeyay kabtanka markab siday muhaajiriin la soo badbaadiyay inay iskudayaysay inay dajiso doon boolisku uu leeyahay.
Carola Rackete ayaa lagu xiray dekedda Talyaaniga ee Lampedusa kaddib muran taagnaa muddo laba todobaad ah.
Markabkeeda, Sea-Watch 3, ayaa waxaa laga mamnuucay inuu ku soo xirto dekedda, hasayeeshee ugu dambeyntii waxa uu ku soo xirtay dekedda habeenkii Jimcaha.
Sabtidii, ayuu Mr Salvini waxa uu Ms Rackete ugu yeeray “haweeney Jarmaliyad caddaan ah, ooqani ah” taas oo soo “qaadday dagaal”.
“Waxa ay isku dayday inay xilli habeen ah dajiso dooni uu boolisku leeyahay oo ay askar saarnaayeen,” ayuu yiri. “Waxay dhahaan ‘naf ayaannu badbaadinaynaa’, hasayeeshee waxa ay halis galiyeen bini’aadam howshoodii gudanaya, muuqaallada ayaa arrintaas muujinaya.”
Mr Salvini ayaa intaasi ku daray: “Markab boqollaal tan ah ayaa waxa uu iskudayay inuu quusiyo doon ay askar saaran yihiin, kuwaas oo ay u suuragashay inay iyagoo badqaba goobta ka baxsadaan. Taasi waa dambi waana dagaal cad.”
Ms Rackete ayey u badan tahay inay wajahdo 10 sanadood oo xarig ah haddii lagu helo inay weerartay dooni booliska uu leeyahay.
Waxa ay soo badbaadisay 53 muhaajiriin ah oo ku xayirnaa xeebaha Liibiya 12 bishan Juun, kuwaas oo doonidii ay saarnaayeen ay sabbaynaysay badweynta Mediterranean-ka.
Kaddib markii ay ku soo xiratay dekedda Talyaaniga ayaa 31-jirkan u dhalatay waddanka Jarmalka waxaa laga duubay muuqaal iyadoo ay hareeraha kaga jiraan booliska.
13 muhaajiriin ah ayey mas’uuliyiintu u ogalaadaan inay gudaha galaan sababo caafimaad awadii, halka Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga, Giuseppe Conte, oo ka qeybgalayay shirka G20 uu sheegay in dhowr dal oo reer Yurub ah ay ogolaadeen inay qaataan 40-ka kale ee muhaajiriin ee soo hartay.
Mr Salvini ayaa doonaya inuu kala ogaado “tirada, waqtiga iyo qaabka” ka hor inta uusan ogolaan in markabku uu dekedda ka furto, ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP.
Waxa uu hore u sheegay in muhaajiriinta loo ogolaan doono inay soo degaan oo kaliya haddii ay toos u tegayaan waddanka Netherlands, halkaas oo ah goobta uu markabkan Sea-Watch 3 ka diiwaangashan yahay, ama Jarmalka.
Ms Rackete ayaa waxa ay sheegtay in markabka Sea-Watch uu iskudayay inuu la macaamilo mas’uuliyiinta, iyagoo la hadlaya Talyaaniga, Jarmalka, Malta iyo Faransiiska iyo inay xiriir la sameeyene Golaha Midowga Yurub.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, kaddib laba todobaad oo ay taagneyd hubanti la’aan ayaa howlwadeennada markabkan Jarmalka laga leeyahay ee gargaarka ee Sea-Watch waxa uu sheegayaan in lagu qasbay in markabku uu galo biyaha waddanka Talyaaniga, maadaama aanay jirin qaab kale oo ay ku xaqiijin lahaayeen badqabka muhaajiriinta saarneyd.
Waa tuma Carola Rackete?
Ms Rackete ayaa waxa ay waddanka UK ku baratay cilmiga deegaanka, waana 31-jir ka qeyb qaadatay safarro lagu sameynayay cilmi baaris ku aaddan deegaanka.
Ms Rackete ayaa markii dambe waxa ay ku biirtay hay’adda Sea Watch, taas oo ah hay’ad aan dowli ahayn oo fulisa howlgallo badbaadin ah oo ay ka fuliyaan badweynta Me Mediterranean.
Haatan gabadhaasi waxa ay noqotay halyey dhanka bidix-dhexe ah, aad uma ay isticmaasho baraha bulshada, hasayeeshee waxa ay mararka qaar soo dhigtaa muuqaal ay ku baahinayso howlgal dad lagu soo badbaadinayo taas oo todobaadyadii la soo dhaafay ay dadka kula wadaagaysay Twitter-ka.
Midkii ugu dambeeyay waxa ay ku sheegtay: “Waxaan go’aansaday inaan dekedda tago, halkan waxaan habeenkii u joogaa dantayda.”
Gudoomiyaha hay’adda Sea Watch, Johannes Bayer, ayaa sharraxay in ficillada Ms Rackete iyo farriimaha ay Twitterka soo dhigaysay ay yihiin “kuwo uu aad ugu faano”.
Sea-Watch International @seawatch_intl
Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.
“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety.” – #SeaWatch chairman Johannes Bayer
3:10 AM – Jun 29, 2019
6,209 people are talking about this
Previous articleXildhibaan Kenyan ah : Farmaajo cag masoo saari karo dalkeena
Next articleXisbiga Ucid oo Madaxawyne Biixi ka dalbaday Arin Ku saabsan Golayasha Degaanka,